Umkhiqizi kanye neFektri Engcono Kakhulu ye-75KW OEM Electric Stainless Induction Burner Cooker UTaiyi
Imodeli TY-DT-C40G + 80G (Heating umthamo35KW) I-TY-CS80G20K / TY-DZST20K (Ukushisa amandla55KW)
Imbiza Nomthamo φ600mm / 3mm 24l
+ φ800mm / 3mm 26l thick700mm / 3 mm ubukhulu; 52 l
Amandla / Amandla 15KW / 380V + 20KW / 380V 15KW / 380V * 20KW * 2 / 380V
Amandla amancane 2.5KW + 3KW 15KW / 380V
Ububanzi be-Plate Yokushisa 370mm + 570mm 570mm
Usayizi 2000 * 1100 * 800 + 470 2000 * 1100 * 800 + 470
Isikhathi sokubilisa ibhodwe lamanzi Gcwalisa amalitha ayi-17 wamanzi bese ubilisa ngemizuzu emi-3 Gcwalisa amalitha angama-36 amanzi bese ubilisa ngemizuzu emi-4
Isikhathi Sesethenjwa Isitsha sebhodishi lesigamu, imizuzu engu-7 + isigamu sebhodwe, imizuzu emihlanu Isitsha sebhodishi lesigamu, imizuzu emihlanu
Isipheki se-induction sisebenzisa ipuleti lekhoyili ukukhiqiza imvamisa ephezulu (20 ~ 25KHZ) eshintshana nenkundla kazibuthe ngaphansi kokwenza kwesekethe yokulawula. Inqwaba yemisinga eminyene eddy ikhiqizwa nge-magnetic (iron) cookware, futhi i-induction current iguqulwa ibe ukushisa ukushisa ukudla. Amandla Ukusebenza kahle kakhulu.
Qiniseka ukuthi usebenzisa insimbi, insimbi engagqwali ekhethekile noma amapani woqweqwe lwawo wokubhaka, nobubanzi baphansi kwepani kufanele bube ngu-12 ~ 26 cm.
Isipheki sokungeniswa sinesilawuli sokushisa ukuvimbela ukushisa ngokweqile, konga ugesi futhi siphephe.
Ngokwamandla okupheka okungenayo, ingahlukaniswa ibe yipheki lokungeniswa lasekhaya kanye nelokupheka lokungeniswa kwezentengiso. Futhi sigxile kakhulu ku- cooker induction cooker.
Iphula indlela yokupheka evutha amalangabi yendabuko futhi isebenzisa umgomo wokushisa wamandla kazibuthe wokungeniswa kazibuthe (obizwa nangokuthi i-eddy yamanje). Isipheki sokungenisa sakha amandla kazibuthe ashintshanayo ngokusebenzisa izingxenye zebhodi lesifunda elektroniki. Lapho umpheki-phezulu kubekwa ezansi kwe-cookware equkethe insimbi, i-cooker Okusho ukuthi, imigqa yensimu kazibuthe eshintshanayo iyanqunywa ukuze kukhiqizwe i-current eshintshanayo (noma i-eddy current) engxenyeni yensimbi engezansi kwebhodwe. I-eddy yamanje yenza ama-electron wamahhala entweni yensimbi ezansi ebhodweni ihambe ngendlela eyi-vortex, idlulise ukushisa kwe-Joule yamanje (P = I ^ 2 * R) Yenza phansi kwembiza kushise. Okokusebenza uqobo kushisa ngejubane eliphezulu futhi kusetshenziselwa ukufudumeza nokupheka ukudla, ukufeza inhloso yokupheka. Inezinzuzo zokushisa okusheshayo, ukusebenza kahle okushisayo, akukho ilangabi elivulekile, akukho ntuthu, akukho gesi eliyingozi, akukho imisebe yokushisa emvelweni ozungezile, usayizi omncane, ukuphepha okuhle nokubukeka okuhle, futhi ingaqedela imisebenzi eminingi yokupheka umndeni.
Langaphambilini I-Sieving Calcium Carbonate ye-Petroleum Proppant Ceramsite Sand Vibrating Screen
Olandelayo: Ikhebula le-Cable Gland elibonisa amanani entengo aphansi